Fitohizan'ny hafatra : Ny fivavahana sy ny fitafiana
endriny - 01/02/2018 15:51
Nisy tovovavy nandalo, nanao mini-mini. Rehefa lasa ilay tovovavy, dia niakatra ny feo: "Jesosy o! zanak'iza koa iny tsy manaja vatana? Ireny ve no fitafy ety imasom-bahoaka! Mpivarotena no fetra!"
Dia hoy aho: "I... angaha mbola tsy tany Majanga?"
"Fitafy tsy maontina ireny. Tsy fampiseho masoandro" Tsy nasiany resaka akory ilay fanontaniako.
Ka na maillon de bain aza no anaovany moa maninona? Andriamanitra aza tsy nanome akanjo antsika tamin'ny noforonina, fa ny devoly no nampisokatra ny saintsika ka nahalala menatra sy nitafy.
Raha ny marina izany ny olona mpino sy manaja an'Atra nihoatra noho I Adama sy Eva tokony tsy manao akanjo izany, fa an'ny devoly ny akanjo.
bichette - 01/02/2018 17:38
Ny olana dia satria efa niditra teto antany ny fahotana sy ny fahafatesana tamin'ny nanotan'i adama sy efa teo amin'ny saha Edena, dia lasa niditra koa ny filàna, filàna ara-nofo io, ka mba tsy hanaitaitra ny hafa.
Atra koa depuis nahalalana menatra sy nahalala fa mitanjaka i Adama sy Eva, IZY Andriamanitra mihitsy no nanamboatra akanjo volombiby an'izy mivady hanakonana ny fitanjahany, noho izany mila miakanjo ny olombelona
rhaj0 - 01/02/2018 23:47
Efa toatoa ny resaka efa nandalo teto ity ry Bichette, ilay @ ilay hoe:
ary Andrmntra ve k'lou mba efa nitafy koa t@ namorona an'i Adama sy Eva??
endriny - 02/02/2018 16:16
Ankehitriny koa dia mbola misy Atra mampitafy friperie ny olombelona Malagasy.
rhaj0 - 02/02/2018 17:59
bichette ... ny filàna, filàna ara-nofo io, ka mba tsy hanaitaitra ny hafa.... mila miakanjo ny olombelona
Ahitsio raha diso ry Bichette, fa tena hotry ny hoe, kay ilay resa-tsesika no itafiana
Donc.... i Atra dia, h@ alpha sy AdamaEva, ka h@ omega sy Apoakalipsa, dia NITAFY.. ngo dia manaitaitra ny hafa eo
endriny - 03/02/2018 15:50
Betsaka ireo misiaonera mandeha any amin'ny faritry Amazona na Indaonezia, manao fitoriana. Ka ny zavatra entin-dry zareo voalohany sy omeny ny olona dia kilaoty sy zipo. Maha-kivy be an-dry zareo Misionera ny mahita ny olona miboridana.
Kanefa ange izay no namoron'Atra ny olona e. Mino aho fa ireto olona any amin'ny alan'i Indaonezia sy Amazaonina ireto no olona mbola tsy voafitaky ny menarana ka mbola tsy mahalala hoe miboridana izy. Ireo no olona madio tsy voakasik'izany fahotana tamin'ny fototra izany.
Miharena - 05/02/2018 14:44
Na dia tsy mbola tonga teto Madagasikara aza ny mpitory avy any dilambato dia efa nitafy ny Malagasy.
Midika izany fa efa ao anatin'ny olona ny hitafy na dia salaka aza.
Ka aza mamorona lohahevitra tsy dia mitombina loatra e!
endriny - 05/02/2018 17:18
ka tsy azo ny maha-kivy an-dry zareo kristianina mahita vahivavy manao mini-mini
rhaj0 - 05/02/2018 17:58
Ka zahavo azany ny resaka fitafiana ao anaty Baiboly ao eee...
Timotia ohatra, izay nosoratan'i Saoly lasa Paoly, dia manafatrafatra tsara mihintsy fa:
1 Timotia 2:9	Ary toy izany koa ny vehivavy, hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mbamin'ny fahamaotinana sy ny fahononan-tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena, na vato soa [perila], na fitafiana saro-bidy,
Ka ilay "volo mirandrana" koa izany "manataitaitra" an-dry Paoly, f'angaha tsy loza.. Tena "en manque" mihintsy anie ry Paoly izany eee... asa inona ihany ny an-dry Paoly vao TSY "maha-taitaitra"
Fa ilay Kristiana kivikivy @ mini-mini koa ve tsy miravaka volamena sy vatosoa?
sady @ izay izao, ao am-piangonana mihitsy no anaovan-dreo ny fitafiana saro-bidy an...
Fa rehefa miresaka ny resak'i Paoly ihany, dia, raha viavy no nanao vava t@ ilay Ikala-mini-mini, dia ilazao ao izy ry Endriny hoe, rahefa piorista toa io ihany, dia ilazao tsy hikatsetsatsetsaka eo, fa araho tsara hoe ilay hoe:
1 Timotia 2:11 Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara.
Miharena - 06/02/2018 05:41
Fantatra fa tsy maintsy tonga amin'ity fanamarihana ity Endriny.
Efa mazava aloha ny teny voatanisa napetrak'i Rhaj0 ary misaotra azy mba makamaka kely ao ihany rehefa mamaly lohahevitra.
Mampahatsiahy ilay debat teo amin'ny Silamo sy Kristianina natao ampahibemaso izay ka ilay Silamo indray no mahalala ny toko sy andininy tao anaty Baiboly. Isan'ny entiny hanamarinana ny maha-Silamo azy izay voalaza ao.
Ka asa aloha hoe ry Athee koa ve mba manao izany? Efa fanombohana angamab aloha ny an-dRhaj0. Tohizo fa tsara ary rehefa mahita fahamarinana dia mba miova e!
Fa raha hiverina amin'ilay fitafy tsy mendrika ataon'ny tovovavy (na ny lehiba aza manao koa) dia hita mihitsy hoe te-handrangitra ireo vehivavy ireo na dia efa toriana ombieny ombieny aza hoe mba maontina rehefa hiditra ny Tranon'Andriamanitra ary ataovy fiainana ny maha-Kristianina anao fa tsy hoe rehefa mivoaka ny Fiangonana dia iny indray fa manao ilay fitafy adaladala. Vao mainka aza voatototra devoly mihitsy ireny tovovavy ireny manao izany eny andalambe.
Hoy Jesoa izay hoe : na dia mila vehivavy na lehilahy ao amponao na ao antsainao fotsiny aza ianao dia efa manota.
Ka mirongatra izao ny fanolanana isan-karazany dia mba mailo ihany fa tena efa miaina anaty helo mihitsy ny olona noho ny fitafy noforoniny hanasongadinana vatana ireny.
rhaj0 - 07/02/2018 13:39
Fa i Miharena ity koa ve "en manque" sahala @ Paoly lasa Saoly, dia maolamaola nandra eraky ny arabe, mahita ny olona miankanjo "manasongadina vatana" ireny ee ???
Torohevitro aminao ry Miharena: ny kapanao jerena rahefa mandeha eny @ arabe ianao, ary aza mierikerika akoriny mihintsy eee... Sady izay koa ange no nolazain'ny Baiboly ee...
Miharena - 09/02/2018 06:21
Io tsy resaka tsy fahampiana fa resaka fahamatorana izay betsaka no tsy manana izany.
Matoa io resaka fitafiana io voasoratra ao anaty Baiboly dia mazava fa misy antony.
ao amin'ny Deot 22: 5 - Aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy; ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy; fa fahavetavetana eo imason'i Jehovah Andriamanitrao izay rehetra manao izany.
Ny mahavoa ny olona ankehitriny dia lasa tsy manan-dalana intsony mba hitondra tena tsara fa maka tahaka izay hitan'ny masony eny nefa rehefa voa tsy arak'io.
rhaj0 - 09/02/2018 12:56
Miharena Ny mahavoa ny olona ankehitriny dia lasa tsy manan-dalana intsony mba hitondra tena tsara fa maka tahaka izay hitan'ny masony eny nefa rehefa voa tsy arak'io.
Dia (mbola) misy tokoany, h@ juge ao zamerika ao, rahefa violée ilay viavy, dia lazainy fa "rehefa voa tsy arak'io".
Danz be mihitnsy ny fisainan'itony Kristiana (fondamentaliste) itony an... Ohatra velona io izany i Miharena.
endriny - 12/02/2018 14:13
tsy Hita intsony izay tena misy an’ireto Kristianina ireto e. Manao mini ianao lazaina fa misy Devoly. Izy mianakavy anefa rehefa mamonjy piscine sy morotsiraka silipo sy sotia sisa no anaovany, Fa tsy manao ohatran’ilay mosilimo manao pataloha sy zipo ary akanjo lava tanana.
Manao akanjo manakona tarehy sy mainty ary lava manakona kitrokely ny mosilimo enjehina. Manao mini ny zanak’olona enenjehina. Aiza re e
rhaj0 - 12/02/2018 14:34
Izany ho'a rehefa "en manque" zareo eee... poriporetin'ny Finoany lava ao hoe "aza manao @ Jeanne", nefa arakaraky ny hanaporetan'ny Finoany azy no vao mainka mampa-te-hanao azy, ary dia io lasa mikitakita lava io ry Rakrisy eee...
izay mihetsika rehetra dia "enjehina" sy ozokozonina daholo.
Miharena - 13/02/2018 05:44
Tsy resaka fondamentalista io fa natoraly mihitsy.
Raha manaraka ny tantaran'ny olombelona isika dia tsy nanao fomba mitanjatanjaka izany raha tsy arivo taona taty aoriana be tamin'ny fotoana nanaovan'ny Frantsay viavy izao fahaleovan-tena ara-panasongadinan-tena izao ka nampiroborobo ny mini-zipo. Tsy any amin'ny fanasongadinana amin'ny maha-olombanona fa ara-panehoana entana fotsiny izao ilay izy.
Dia roboka daholo ny bodo sy adala rehetra dia io no vokany aloha ho an'izay manaraka izany.
Ny tena nahatana ny fahamaontinana dia ny Masera sy ny Silamo ary ireo Kristianina izay nandrara ny mpino ao aminy tsy hanao ny fanao tsy mendrika.
Tsy mora ny mamerina ny olona amin'ny lala-mahitsy rehefa samy tsy manam-panahy an-dalana e! Ny tatoazy moa dia efa atao toy ny inona any amin'ny tany milaza azy fa madroso hono dia arahan'ny tany mahantra toa antsika Malagasy koa.
Tsy fahamaivanan-doha ve no fijerinareo ireny fomba ireny?
endriny - 13/02/2018 13:44
rhaj0 - 13/02/2018 15:16
Ka i Miharena le fondamentaliste ao azany ve k'lou mba mamely ny hira hoe,
wanna be like Jesus, ary dia manaraka ny lamaodin-Jesosy,
sa manaraka ny "fahamaivanan-doha" 2018 ao ihany eee..
Ka ao @ imazination-n'i Miharena, toatoa ny ahoana i Jesosy ao?
Jereo ny etsy ankavia, tombano ny etsy ankavanana??
hi hi hi... ilay etsy @ ankavanana re no Jesosy eeee...
voasoloky tao ianao, nampi-imaziner-n'ny Vazahalamofo fa ilay etsy @ ankavia no izy.
Ka tandremo sao "taitaitra" mahita ity profil-ny eto ity ry Miharena an...
ka ho petsa h@ ecran eo
endriny - 13/02/2018 15:37
Ka raha io sary io ry Rhaj0 no atao ao am-piangonana angamba tsy hisy olona voasarika hivavaka intsony a.
Dokam-barotra daholo io e. Tsy maintsy hoe Thierie Henry no aseho na Angelina Jolie, fa tsy I Rainitangena sy Ketabozy akory. Manjary tsy misy mividy ny entana.
Nisy namana te hanao pasitera fa tsy voaray nianatra ho pasitera izy satria sima (Tantara tena marina).
Miharena - 14/02/2018 06:36